Abantu abaningi manje abaqondi ukuthi kuzoxoxwa ngakho esihlokweni sethu. Okokuqala sidinga ukuthola ukuthi yini ukuthi lichaza ukuthini igama elithi. Okwakushiwo "sochivo" lingachazwa ngokuthi ijusi kusukela poppy, Hemp nokunye. P. Of imbewu, esetshenziselwa Esikhundleni samafutha, kanye izitsha okulungiselelwe ngesisekelo salokhu.
Ngokusho kwenye inguqulo igama dish livela egameni Christmas Eve. Kufanele bazi ukuthi ngalolusuku izivakashi awumenyiwe, futhi ukudla (kwantambama) asabalala ukuba abangane babo kanye nezihlobo.
Ikhaya ngamunye osikweleta a ukwamukelwa ezinkulu yokudla okungenani sochivo kancane. Uma ukholwa ukuthi le nganekwane, iletha endlini inhlalakahle kanye nezempilo unyaka wonke.
Kutya noma sochivo - lokho ukukhetha?
Kutya kutya noma (kwizindawo ezahlukene ukuyibiza ehlukile) - noma insima wenza kakolweni nokusanhlamvu omisiwe imbewu poppy, uju. Kukhona izindlela eziningi ekuwulungiseleleni welayisi, ibhali, kodwa zakudala Christmas kutya ohlale ekulungele lonke kakolweni nje. Ngaphezu kwalokho, kutyu isinqumo ukupheka ngosuku olwandulela Epiphany kanye Old New Year.
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini kutia sochivo
Eqinisweni, kuphela ukuthi kutia lingalungiswa e izindlela eziningi, ezisetshenziswa for izikhathi ezahlukene (beba nemingcwabo, zokuzalwa) kanye sochivo - lena impendulo eyodwa vo, okuyinto elakhelwe olwandulela uKhisimusi - kusihlwa esandulele Christmas. Sochivo ingalungiswa esusela likakolweni nebhali, irayisi, wengeza amantongomane noju.
Indlela ukupheka sochivo
Kwenze ngokuphazima kweso. Kodwa kumelwe wazi ukuthi isidlo sochivo has nezimfanelo ezingavamile zomunye ayo ukuthi kudingeka kucatshangelwe. Imfihlo eyinhloko ngendlela ekhethekile ukupheka okusanhlamvu. It ahluke kancane kusukela bendabuko: inkomishi irayisi (parboiled efiselekayo) ukugcwalisa ingilazi yamanzi kanye thumba ke imizuzu nambili phezu ukushisa low kakhulu. Susa pan ekushiseni ake sokunika imizuzu eyishumi iqolo. Gcwalisa sochivo steamed irayisi omisiwe namanzi uju. Ungakwazi ukwengeza nedlanzana nuts alimondi, nedlanzana hazelnuts, lemon locezu, orange amancane, 50 amagremu poppy. Kuyinto efiselekayo ukuthi Amantongomane engahluziwe fresh.
Sochivo elayisi: iresiphi № 2
Hashaza ngaphansi kwamanzi agobhozayo, ingilazi irayisi izikhathi eziningana ethela amanzi enodaka. Ukubeke ebhodweni elincane noma ladle, sigcwale amanzi (abandayo) futhi imenze ngamathumba. Khona-ke, ngokusebenzisa abakhwabanisi kanye uxubha futhi oluthile lokudla. Thumela kabusha ibhali ebhodweni. Manje engeza amanzi amaningi. Uma uqala ukuba nithele, engeza usawoti ukunambitha. Bilisa irayisi kuze kuphekwe, bese oluthile lokudla ngesihlungo, kepha irayisi ukugeza akusadingeki.
Kuze okusanhlamvu okuphekiwe, imizuzu eyishumi, uthele amanzi abilayo futhi ake it yenza for nedlanzana omisiwe (ungakwazi abeke ngaphezulu ukunambitheka yakho). On a grater emihle grate le 50-75 amagremu alimondi hazelnuts. 50 amagremu poppy efakwa esitsheni amancane uligcwalise ukuze amanzi asimboze kwenye umunwe. Beka izitsha on isitofu ukupheka imizuzu amabili, ibangele njalo. Mac cool. Kancane kancane ngokungeza liquid honey, usebenzisa lokhuni imbewu pestle gaya poppy ibe mass homogeneous.
Ukulungele futhi selehlile irayisi Dlulisela ku endishini enkulu futhi kahle mix it nge imbewu uju-poppy. Bese wengeza imvuthuluka nut uhlanganise kahle futhi. Engeza omisiwe steamed. Kulandelwa khama aphume nocezu lemon orange juice ugovuze konke futhi. On ezinkulu isidlo flat noma plate isethi ukupheka indandatho, uligcwalise mass etholwe, ngokucophelela ukususa ifomu phezulu nihlobise izithelo candied namantongomane. Indishi ulungile!
Sochivo: iresiphi kakolweni
Ukuze uqale, udinga ukuthenga lonke (hhayi olwembiza!) Ukolweni. Iphuzu liwukuthi zingabantu ngesisekelo ukunambitheka yokuqala ukudla isiko. Desirably, imbewu abangu oyi-ehlutshiwe steamed. Kulokhu, bona, kubiliseni. Sochivo ukulungiselela iresiphi ulula, nje phezu kwamanzi. Akunakusetshenziswa musa add ubisi noma ukhilimu: isidlo Lenten, nokuthi-ke.
Ngakho, uthele amanzi abandayo kwi okusanhlamvu kakolweni bese upheka kwabo ngaphansi ikhava kuze ithenda phezu ukushisa low. Ihlola ukuthi wonke amanzi abilisiwe kude, engeza amanzi abilayo uma kunesidingo. Ngaphambi kokuphela ukupheka ebhodweni kufanele ube mass semi ketshezi. Kulokhu, thina akudingeki lokudlela crumbly. Pan kungaba asuswe isitofu bese wengeza ukolweni oqoshiwe amabhilikosi omisiwe, asithena, omisiwe steamed. Ungengeza futhi izithelo eluhlaza: apula, ithini lamapheya - incike okuthandayo. Vala lid pan ningavumeli ukuba okuhle steamed ndawonye.
Ngaphandle nuts akukho izitsha ezifana sochivo. Indlela sokulungiselela kuhilela ukusetshenziswa ezihlukahlukene nati, incike ukunambitheka yakho. Ungasebenzisa ukhuni, walnuts, cashews, nama-alimondi, amantongomane nokunye. Vuliwe. Crush nabo a imvuthuluka hhayi lincane kakhulu futhi kancane Fry epanini. Ungafaki uwoyela, amantongomane ugovuze njalo.
Indlela apheke poppy
Manje yisikhathi ukulungiselela poppy. Gcwalisa-ke ngamanzi abilayo wasiqashisa sukuma ngaphansi lid ivaliwe imizuzu engamashumi amathathu. Khona-ke sokukhipha amanzi, engeza uju noma ushukela uhlanganise kahle bagcobe ngendlela ezifana avele juice emhlophe. Mac nati, enezele kakolweni kokuqendwa nge izithelo ezomisiwe. Hlanganisa kahle zonke izithako, uma kudingekile, engeza uju ngaphezulu. Manje babeka zonke kahle kwi plate, Hlobisa nge nuts.
Kanjani sochivo uma ukolweni hhayi ayilungiselele kusengaphambili
Thatha ingilazi kakolweni, uphahla yabo esigqulweni sokhuni, unezela amanzi kancane afudumele ukusuka igobolondo nge ubhontshisi. I-nucleus ahlukaniswa khoba ize iyofinyelela embewini, ufune nokugeza. Khona-ke kuphekwe evamile iphalishi crumbly mafutha, lapho engezwa nati, uju, imbewu poppy.
Omunye ingilazi egcwele kakolweni muhle ukuze umise, ugeze. On amahora amabili noma amathathu cwilisa emanzini abandayo. Khona-ke usonga cheesecloth kuya ingilazi yamanzi, futhi wabeka kakolweni ebhakedeni. Thela amanzi abandayo lapho isilinganiso 1: 3, usawoti kancane, ubilise cishe amahora amabili phezu ukushisa low. Can isitsha groats wafaka kuhhavini osuke usushisa kakade at 180 ° C futhi uqhubeka umsungulo okusanhlamvu. Nakuba kakolweni iphekwe, uthele amanzi abilayo poppy nilishiye libe isigamu sehora. Khama umhluzi ngokolweni, kodwa abanye ikhefu lakhe ukuncibilikisa uju kulo. Ukolweni uthele amanzi uju, evuvukele poppy Mash kuze ijusi emhlophe, nquma nati. Hlanganisa wonke izithako ake isidlo isiphuzo kancane.
Lapho ulungiselela lokhu isidlo?
Sochivo, iresiphi zazo Sizonikela, wenza ukupheka ngosuku olwandulela uKhisimusi ngendlela samaholide Christmas Eve. AmaKristu obu-Orthodox ukugubha lesithupha yakhe ka-January, amaKristu aphila esikhathini ikhalenda le-Gregorian, baligubhe ku 24 Disemba.
Svyatvecher - kangaka okuthiwa umndeni dinner ngobusuku obandulela uKhisimusi. Lolu wusuku lokugcina futhi final zokuzila ukuthi amakholwa kufanele ukuchitha kuphela amanzi emalungiselelweni zemikhosi futhi ukukhathazeka. ithebula Festive ehlanganiswa ngendlela ekhethekile: enhlanzi ngaphansi kwendwangu yetafula walala hay, futhi indlu lihlotshiswe uhlobo esikhundleni izihlahla - Didukh. Lokhu kuhlobene spikelets kakolweni notshani. Ngokusho yetinsita bona axoshe imimoya emibi futhi sidonsele ukuchuma nenjabulo endlini. Kusihlwa etafuleni kumelwe nakanjani babe nambili Meatless izitsha - isibalo abaphostoli. Dinner iqalwe emva wokuqala inkanyezi liphuma esibhakabhakeni. Kuyoba uphawu iNkanyezi eBhetlehema, lapho owamenyezelwa le nokuzalwa koMsindisi. Ngemva kokudla kwakusihlwa, ekuhambeni abathembekile esontweni ukuze iqhaza izimfundiso, ngemva kwalokho kungenzeka ukuba aphule okusheshayo - udle inyama.
Sauce izinhlanzi amakhekhe. ongakhetha ukupheka
7 amaseshini ezokwenza umsebenzi wakho ubuchopho ngokushesha